FANANAHANA SY FANDROSOANA : Miady mafy ny zony ireo LGBTQIA+ eto Madagasikara
Manomboka mahazo vahana ny vondron’ireo olona mifanambady mitovy fananahana sy ireo mpiray sokajy amin’izany na LGBTQIA na ( Lesbian, gay, bisexual, transgendered, queer, intersexual or asexual) eto Madagasikara ary efa hita an-karihary eny anivon’ny fiarahamonina izy ireo. 13 juillet 2021
Efa tazana misy azy ireny koa aza eny amin’ireo sekoly ambaratonga faharoa.
Nampihetsika ny hambom-pon’ireo vondrona LGBTQIA ny fandraràna ny hetsika takariva mahafinaritra nokasain’izy ireo natao, ny faran’ny herinandro lasa teo teny Isoraka. Nampitombo ny risi-pony ihany koa ny fahitana ilay tovolahy malagasy roa nifanambady tany Parisy Frantsa.
Ny fahatsapana ny tena izay mety miankina amin’ny fitaovam-pananahana na tsia no mamaritra ireo toe-tena ireo na antsoina hoe "identité de genre" ary voalazan’ireo manam-pahaizana ara-tsiansa fa voajanahary izany. Fahatsapana ara-boajanahary eo amin’ny samy lahy na samy vavy ity toe-tena ity. Rehefa adolantsento ireo sokajin’olona ireo izay vao tena mahatsapa ny toe-tena na ny mety ho fiovan’ny toe-batany ary ny filàny na antsoina hoe fibirioka ara-pananahana na "orientation sexuelle" ; izany hoe rehefa mitsiry ao anatin’izy ireo ny fitiavana izay vao mahatsapa ny maha-lahy na ny maha-vavy azy izy ireo.
Raha ho an’ity lehilahy iray nanaovanay fanadihadiana dia “Homo-demi-romantique asexuel” no toe-tenany. Sokajy lehilahy miaraka amina lehilahy mitovy fananahana aminy ny tenany araka izany ka manakaiky ny fony kanefa tsy manana fifandraisana ara-nofo aminy. Vao tanora erotrerony ity tovolahy ity satria vao 26 taona monja izy ary manam-pitiavana lehilahy mitovy aminy izay efa nananany fifandraisana hatramin’ ny ela. Zava-dehibe, hoy izy, ny fifankatiavanay ary miaina malalaka ao anatin’ny fitiavan’olon-droa izahay ka mifankatia tsara ka manana tanjona amin’ny fiainana toy ny olon-droa rehetra. Ny tanjona ny hivady no mbola tsy misy hatreto.
Fahavetavetana ho an’ireo kristianina Malagasy ny fivoizana ny LGBTQIA ary tsy fankatoavana an’Andriamanitra. Efa nanambara izany ny FFKM, efatra taona lasa izay, tao anatin’ny fehin-kevitra nataon’ny komity foibe eo anivon’ny Fiombonan’ny Fiangonan’ny Kristianina Malagasy na FFKM faha-41 tamin’ny taona 2018, mitsipaka sy manohitra izany hatramin’ny farany ny mety ho fanambadian’ny samy lahy na ny samy vavy izany ary hijoro foana tsy hanaiky izany velively. Ara-Baiboly dia fahavetavetana eo imason’Andriamanitra izany ary fahotana mety hampirehitra ny fahatezerany, araka ny fanazavan’ny filoham-piangonana zandriny iray. Porofo hita izao trangana faharipahana amin’ny alalan’ny areti-mandringana manerana izao tontolo izao. Mipaika any an-danitra, hoy izy, ny fahavetavetana ka mahatonga an’Andriamanitra handringana. Tokony ho tonga saina ny rehetra araka izany, hoy izy, amin’ny fivoizana sy fanekena ireo LGBT fa mety hahatezitra an’Andriamanitra. Tokony hijoro koa ny kristianina mba ho fiarovana ny taranaka tsy hirona amin’izany, araka ny fanazavany hatrany.
Mbola zava-pady eo amin’ny malagasy ny LGBTQIA
Mampanahy sy mampatahotra ny olona eny anivon’ny fiarahamonina ny fahazoan’ity sehatra iray ity vahana eto Madagasikara na dia mbola isan’ireo Firenena 32 tsy mankasitraka aza ny Firenena Malagasy. Mampihoron-koditra ireo ray aman-dreny koa etsy an-kilany ny mitaiza ireo tanora manoloana ny fivoaran’ity tranga ity. Zary lasa ataon’ny tanora lamaody ary hita fa tena mirona mankany ireo adolantsento ankehitriny. Raha ny hita eny rehetra eny mantsy dia revy sy andrakandrana ataon’izy ireo no mandrisika azy ireo hanana ity toe-tena LGBT ity. Mazàna dia miafara amin’ny fampanofana tena sy mampanofa fahafinaretana no hiafaran’ireo tanora tafaroboka amin’izy io. Izany hoe mitarika ny maro hanana fitondran-tena tsy mendrika izany no sady fahavetavetana eny amin’ny fiarahamonina malagasy. Hany ka miafara amin’ny fanilihan’ny fiarahamonina malagasy. Mifanipaka tanteraka amin’ny kolontsaina sy soatoavina malagasy ny fivoizana izany.
Mitohy mitaky ny zony ireo LGBTQIA+
Na dia miaina amin’ny toe-tena tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ary tsy mitovy amin’ny olon-drehetra aza ireo sokajin’olona ireo dia hita fa mahazo tosika sy fampahalalana ilay foto-pisainana ka mahazo vahana hatrany. Miady mafy ny zony izy ireo ankehitriny mba ho voahaja eny anivon’ny fiarahamonina ary manan-jo hiaina malalaka. Namoaka fanambaràna mahakasika izany indrindra ny fikambanana sy hetsika ary ireo Malagasy monina any ivelany miaro ny zon’olombelona. Nivoitra tao anatin’izany ny fiarovana ny zo maha-olona azy ireny mba tsy ho voahilika sy hanan-jo hiaina tahaka ny olon-drehetra.